यसपालिको बुलमा यसकारण बढी जोखिम छैन
काठमाडौं : पुँजी बजारले १५ सय अंक पार गरिसकेको छ । बजारमा बुल रेसको प्रतिस्पर्धाजस्तै भइरहँदा विगतको बुल र अहिलेकोमा के फरक छ भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको स्थापनाको करिब २३ वर्षे दौरानमा धेरैपटक बजारले बुल र बियरिसको यात्रा पार गरिसकेको छ । प्रत्येक बुलमा अघिल्लो बुलको भन्दा थोरै फरक प्रवृत्ति देख्न सकिन्थ्यो ।
तर यसपटकको बुल भने विगतका भन्दा नितान्त फरक देखिन्छ । नेप्से परिसूचक लगातार बढिरहेको छ । नेप्सेले प्रत्येक महिना अनि साताजसो नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै अगाडिको यात्रा तय गर्दैछ ।
नेप्सेले नयाँ रेकर्ड बनाइरहँदा कतिपय कम्पनीको भाउ घटिरहेको छ । बजारले १५ सय अंक पार गरेको दिन पनि धेरै कम्पनीको सेयर भाउमा रातो लागेको देखियो । यही नै यसपटकको बजारको विशेषता हो ।
विगतका बुललाई फर्केर हे¥यौं भने हामी एकोहोरो पाराले सबै कम्पनीका भाउ बढिरहेका हुन्थे । बजारले यसरी नयाँ रेकर्ड बनाउँदा बिरलैमात्र कुनै पनि कम्पनीका भाउ घटेका देख्न सकिन्थ्यो । तर यसपटक बजार निकै परिपक्क देखिएको छ । लगानीकर्ता अझ बढी क्यालकुलेटिभ । यतिबेलाको पुँजी बजारको स्ट्रेन्थ भनकै यही हो ।
समूहगतरूमा सेयरको भाउ घटबढ भइरहेको छ । एउटा समूहको बढ्दा अर्कोको घट्ने । यसले बजारलाई दिगो बनाउन सहयोग पु¥यायो । एकैपटक सबै कम्पनीको भाउ पनि नबढ्ने भयो । अनि, कम्पनीहरूमा हुने अत्याधिक जोखिम पनि कम भयो । अझ, बेलाबेला सानोतिनो करेक्सन पनि आएकै छ ।
नेप्से १५ को तहमा पुग्दा धेरैले परिसूचक बढी भयो । अब बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । तर, म भन्छु, हामी इन्डेक्सलाई छाडिदिउँ । आफूले किनेका कम्पनीमा मात्र ध्यान केन्द्रित ग¥यौं । इन्डेक्स त आफ्नै ढंगले अघि बढिरहेको छ । हुन सक्छ, यसले अझै निकै लामा यात्रा गर्नेछ । यो त समुद्र जस्तै हो, अघि बढिरहन्छ ।
लगानीकर्ताले बेलाबेला नाफा बुक गर्दै जानुप¥यो अनि सबल कम्पनीमा लगानी गर्नुप¥यो । म त बैंक र बिमा कम्पनीमा जोखिम देख्दिन । किन भने २०६५ को भाउसँग अहिलेका कम्पनीको भाउ तुलना गरौं न । २०६५, जतिबेला बजर उचाईमा पुगेको थियो, त्यसबेला स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको भाउ नौ हजार ६ सय पुगेको थियो ।
अहिले तीन हजार हाराहारीमा छ । त्यतिबेला नेप्से ११७५ मा थियो, अहिले १५ सय माथि । त्यस्तै, नबिल बैंकको भाउ त्यसबेला ६ हजार सात सय पुगेको थियो, अहिले २५ सय भन्दा तल । बंगलादेश ३६ सय, एसबीआई २७ सय, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट २७ सय अनि एनआइसी १७ सय पुगेका थिए । ल, यसैलाई आधार मानौं ।
अहिले नेप्से १५ सय पुग्दा यी कम्पनीको भाउ कति छ ? उत्तर आफैं निक्लिन्छ । यसकारण म भन्छु, राम्रा कम्पनीमा कत्ति पनि जोखिम छैन । फेरि, अर्को कुरा, अहिले बजार बढे पनि पहिलाको यो भाउमा पुग्दैन ।
धेरैलाई विगतमा हकप्रद सेयर जारी गरेकाले बजार क्र्यासको अवस्थामा पुगेको थियो । यसपटक पनि हकप्रदपछि यस्तै हुन्छ भन्ने डर लागेको देखिन्छ । तर यसपटक त्यस्तो हुनेवाला छैन ।
कारण, पहिलका बुलमा भाउ अस्वभाविक बढेको थियो र पो, अस्वभाविकरूपमै घट्यो त । जस्तो, एनआइसी एसिया बैंक नै हेरौं न । अब हकप्रद तथा बोनसबाट आठ अर्ब पु¥याउन लाग्दा भाउ आठ सय भन्दा तल छ ।
यस्तो भाउ भएको कम्पनीले आठ अर्ब बनाएपछि घटेर कतिमा आउला त ? यसकारण भन्दैछु, पहिलाको बुल र अहिलेको बुलमा कति धेरै फरक छ ।
विगतमा चार करोडमा स्थापना भएका बैंकको पुँजी अहिले आठ सय करोड पुग्दैछन् । अब नयाँ बैंकको आइपीओमा लगानी गर्न पाइने अवस्था छैन । कम्पनी सबल बन्दै गएका छन् । यी सबै पक्षमा लगानीकर्ता सजग भएको देखिन्छ ।
यसैगरी, बिमा कम्पनीको भाउ धेरै भयो भन्नेहरू पनि छन् । बिमाको भाउ तुलनात्मकरूपमा बढेको पनि छ । तर हामीले बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी कति छ भन्नेतर्फ पनि त ध्यान दिनुपर्छ ।
मैले, पहिले पनि भनिसकें, चार करोडमा खुलेका बैंकको पुँजी अहिले आठ अर्ब पुग्दैछ । अब १० करोड, २५ करोड वा ३० करोड पुँजी भएका बिमा कम्पनीको पनि निश्चय नै एक सय करोड, दुई सय वा चार सय करोड पुँजी पु¥याउनैपर्छ । यो समयको माग हो ।
ल, तपाईं नै भन्नुस्, २५ करोड पुँजी भएको कम्पनीको एक सय करोड पुँजी पुग्दा कसरी जोखिम हुन्छ । हकप्रद, बोनस, एफपीओ जे भए पनि दिनैप¥यो । बिमा कम्पनीको व्यापार पनि बढ्दोक्रममा छ । यसआधारमा म बिमामा त झन् जोखिम देख्दिन् । तर म फेरि पनि दोहो¥याएर भन्छु, कम्पनी राम्रो छान्नुप¥यो । बजेटमा बिमामा केही आउने अपेक्षा लगानीकर्ताको छ ।
यसपटकको बजारको अर्को अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सर्किट ब्रेकर नलाग्नु हो । नेप्से लगातार माथि गइरहेको छ । तर पछिल्ला दिन हेर्नुभयो भने समग्र नेप्सेमा सर्किट ब्रेकर लागेकै छैन ।
यसको अर्थ, हल्लाका भरमा सबै कम्पनीको भाउ अस्वभाविकरूपमा बढेको छैन भन्ने हो । तर, पहिलाको बुलिस बजारमा प्रत्येक दिनजसो सर्किट ब्रेकर लाग्दथ्यो ।
अहिले डिम्याट कारोबारले निकै सजिलो बनाइदिएको छ । किनबेच गर्न निकै सहज भयो । थोरै नाफा हुने बित्तिकै बिक्री गर्न अनि घटेपछि किन्न पाइने सुविधा छ । यसले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान सकारात्मक बनाएको छ ।
पहिला बजार बुल रनमा जाँदै गर्दा संस्थागत लगानीकर्ता थिएनन् । अहिले सामूहिक लगानी कोष कम्पनी छन् । बजार निर्माता भित्र्याउने तयारी हुँदैछ । यी सबैको सारांश बजारमा जोखिम छँदैछैन भन्ने होइन । सेयर बजार जोखिमकै क्षेत्र हो । घटबढ बजारको नियम पनि हो ।
तर हामीले विगतमा बजार टुप्पोमा पुगेर फेदमा खसेको देखेकाले डराएका हौं । अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छैन । ल, अनुमान लगाऊँ न । १५ सय पार गरिसकेको बजार धेरै घटे पनि एक हजारभन्दा तल आउला त ? मलाई त लाग्दैन ।
(ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष नन्दकिशोर मुन्दडासँग नेपाली पैसाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)